Solvent Cement ၏ Double Union Ball Valves နှစ်ခုသည်ပြည်ထောင်စုအစွန်အဖျားနှစ်ခုရှိပြီး၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပိုက်လိုင်းမှပိုက်လိုင်းကိုပြန်လည်ဖြုတ်နိုင်သည်။ ကရာဇ်၏အရွယ်အစားတွင်ချည်မျှင်နှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းများဖြင့်အဆုံးသတ်ထားသော PVC Double Union Ball Valves များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PVC အဆို့ရှင်များသည်မြင့်မားသောသက်ရောက်မှုနှင့်ဆန့်နိုင်သည့်စွမ်းအားကိုပေးစွမ်းနိုင်သောအပြင်များစွာသောဓာတုပစ္စည်းများအားခုခံနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ အခြေအနေအားလုံးတွင်ပြီးပြည့်စုံသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Double Union Ball valves များသည်အမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ 16 bar အထိအလုပ်လုပ်နိုင်သောဖိအားတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အရွယ်အစား: ၃၂-၁၁၁ ၁ "-4"
၁ မှ ၁4မှ ၄ Size အထိအရွယ်အစား
2. ANSI、 BS、 DIN、 BSPT စံသတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိနိုင်သည်
ချည်စွန်းသို့မဟုတ် socket ကြီးစွန်းနှင့်အတူ 3.
ရှေ့သို့ တရုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသော Upvc Ball Valve - PVC Compact Ball Valve- Socket / Thread - GreenPlains
နောက်တစ်ခု: ဆည်မြောင်း Ball ကို Valve
PVC ကို Double ပြည်ထောင်စု Ball ကို
PVC လူပျိုပြည်ထောင်စု Ball ကို Valve
ဆည်မြောင်းများအတွက် UPVC Ball ကို Valve
UPVC ကျစ်လစ်သိပ်သည်း Ball ကို
UPVC Octangal ဘောလုံးအဆို့ရှင်
Air ကို Valve- Uni